I-samsung ye-galaxy note 5 kunye ne-s6 edge kunye nehla nge-fcc kunye ne-verizon kunye ne-t tte band
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Samsung Galaxy Note 5 kunye ne-S6 edge Plus yehla yi-FCC ngeVerizon kunye ne-AT & T LTE band
I-Samsung Galaxy Note 5 kunye ne-S6 edge Plus yehla yi-FCC ngeVerizon kunye ne-AT & T LTE band
Kwangoko namhlanje kwafunyaniswa ukuba zombini i-Samsung Galaxy Note 5 kunye ne-Samsung Galaxy S6 edge Plus batyelele iFCC. Uninzi lwexesha, xa isixhobo siqinisekiswa yi-FCC, oko kungumqondiso wokuba ukumiliselwa kungasondela, kwaye, kwimeko yomhlathana wamva nje wokumiliselwa kuka-Agasti ojikeleze iGreen Note 5, olu lulwazi olubalulekileyo.
Kule veki iphelileyo, zombini imithombo yangaphakathi engenagama kwaye abahlalutyi beshishini inyukele phezulu ukuba ibango lokuba i-Samsung Galaxy Qaphela 5 iyakwaziswa ngo-Agasti 12. Ngelixa uqikelelo lomhla wokukhutshwa luyahluka phakathi kuka-Agasti 14 no-Agasti 21 (kuthi, eyokugqibela yeyona nto ibonakalayo), isivumelwano ngokubanzi kubonakala ngathi yiSamsung khawulezisa ukumilisela i-Galaxy Note 5, kunye nokwahluka okubini kulindeleke ukuba kubizwe ngokuba yi-Samsung Galaxy S6 edge Plus, ngokukhawuleza. Ukuba u-apos uyazibuza, ewe, aboni bathi yi-Apple iPhone 6S kunye ne-iPhone 6S Plus ezayo.
Ukuqala nge-Galaxy Note 5, zombini i-AT & T kunye neenguqulelo zeVerizon zibonwe kwindawo yedatha yeCCC. I-Verizon Galaxy Qaphela i-5 inenombolo yemodeli SM-N920V, kwaye iyahambelana neVerizon LTE band 2, 4, and 13. I-SM-N920A, inguqulelo ye-AT & T, iyahambelana neebhendi ze-AT & T LTE 2, 4, 17, kunye nebhendi 12, eya kuthi i-AT & T iqale ukuyisebenzisa ngoSeptemba.
Kwimeko apho ufuna i-recap emfutshane, i-Samsung Galaxy Note 5 kulindeleke ukuba ize nayo yonke into inye Exynos 7422 chipset, 4GB ye-RAM , Kunye ne-5.67-intshi ye-Super AMOLED isibonisi esisebenza nge-1440 nge-2560 pixels (QHD). Ngokwendlela yoyilo, i-Galaxy Note 5 kuthiwa ifumana inkuthazo enkulu kwi-Galaxy S6, kwaye iya kudibanisa isakhelo sesinyithi kunye neglasi ngasemva . Ngelishwa kwabanye , Imithombo emininzi icebise ukuba ukufana kuya kwandiswa kukusilela kwebhetri esusekayo kunye nenkxaso ye-MicroSD.
Iinguqulelo zeVerizon kunye ne-AT & T ze-Samsung Galaxy S6 edge Plus zithwala iinombolo zemodeli ze-SM-G928V kunye ne-SM-928A, ngokwahlukeneyo, kwaye zixhasa iibhendi ezifanayo ze-LTE njengeenguqulelo zeNqaku 5.
Njengoko igama elinamahemuhemu lisitsho, i-Samsung Galaxy S6 edge Plus kuthiwa yinguqulelo evuthuzayo (ngokobungakanani) bomda we-S6. Ngelixa ezinye ze iingxelo zakwangoko I-Samsung ithi iza kusebenzisa i-Qualcomm & apos; s Snapdragon 808 chip, ulwazi lwamva nje lubonisa ukuba Isamsung ekugqibeleni ikhethe i-Exynos 7420 , le chip inika amandla iGPS S6.
umthombo: FCC ( 1 () Mbini () 3 () 4 ) nge Yanguyen
Eyona midlalo mihle yokuzikhusela kwi-ios 2016
I-Verizon iswitha ezona ntengiso zihlawulelwa kwangaphambili ngesaphulelo esongezelelweyo kwi-Intanethi kuphela
Isikhokelo sokuhlaziya i-Galaxy S6 Nougat siphelile, nantsi iyantlukwano nge-Android 7 kwi-S7
Iingcebiso ezili-16 kunye namacebo okuphucula ubomi bebhetri kwi-Galaxy S7 kunye ne-S7
Uvavanyo oluqhelekileyo lokuZenzekelayo
Eyona matyala e-Samsung Galaxy Note 4
Kule veki kwaye ii-apos; eyona nto ibalaseleyo yokunikezelwa kwe-T-Mobile ngolwe-Lwesibini ayizange iphinde isebenze, kwaye abathengi bacacile
I-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus iza neebhetri ezincinci, ubukhulu butyhiliwe
Uthotho lwe-Apple 5 kunye noFitbit Versa 2
Ukubaleka kweSuper Mario: Izigidi ezingama-40 zokukhuphela, hayi ezininzi ziguqulelwe ekuthengeni. INintendo icacisa ukuba kutheni ithathe isigqibo ngexabiso leedola ezili-10